सर्वोच्चको फैसलापछि माधव-झलनाथ ओलीतिर, बादल र टोपबहादुर प्रचण्डतर्फ जानुपर्ने! - Dainik Online Dainik Online
सर्वोच्चको फैसलापछि माधव-झलनाथ ओलीतिर, बादल र टोपबहादुर प्रचण्डतर्फ जानुपर्ने!
काठमाडौं । आज पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हालको प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष बनेका माधव कुमार नेपालको जन्मदिन हो।
६९ औं जन्म दिनका अवसरमा नेताहरूले नेता नेपालको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको शुभकामना व्यक्त गरिरहेका छन्।
यसअघि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने दिन प्रधानमन्त्री ओलीको पनि जन्मदिन परेको थियो। अदालतको फैसलाबाट ओलीपक्षले ठूलो धक्का महसुस गरेको थियो।
संयोग आज पनि कस्तो पर्यो भने सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम विवादमा फैसला सुनायो। यसले ओली र प्रचण्ड समूहमा ठूलो धक्का महसुस गराएको छ।
डबल नेकपालाई खारेज गर्दै सर्वोच्चले ऋषिराम कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिएको हो। सर्वोच्चले कट्टलेको नेकपालाई मान्यता मात्रै दिएन। साविककै एमाले र माओवादी केन्द्र रहने गरि फैसला गरिदियो।
नेकपालाई दलविहीन हुनबाट जोगिने गरी सर्वोच्च अदालतले साविककै दलहरू रहने गरि फैसला गरेको हो। अब एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि एक हुने हो भने दुवै दलका अध्यक्षहरु प्रचण्ड र ओलीबीच सहमति भएर नयाँ नाम खोज्नुपर्ने छ। र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले भने, ‘नेकपा अधिकारिकताबारे सर्वोच्चको फैसलापछि हामी पुरानै अवस्थामा फर्कियौँ। एकता गर्नुपरे अब नयाँ आधारमा हुनेछ।’
अफ्ठेरोमा माधव नेपाल झलनाथ, बादल र टोपबहादुरहरु
सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि अब सो दलको टिकट लिएर सांसद बनेकाहरू आ-आफ्नै घरमा फर्कनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरु बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेताहरु हाल कोही ओली र कोही प्रचण्ड समूहमा लागेका छन्।
एमालेको टिकटबाट सांसद बनेका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्री, भीम रावल लगायतका धेरै सांसद अहिले प्रचण्ड खेमामा छन्।
यस्तै, प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट टिकट लिएर सांसद बनेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह लगायतका नेताहरू अहिले ओली समूहमा लागेका छन्। उनीहरु सबै सरकारमा मन्त्री समेत छन्।
सर्वोच्चको फैसला हेर्दा अब एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि सबैले आ-आफ्नो घर फर्कनुपर्ने भएको हो। जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले अब एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र पार्टी चिन्ह सूर्य, त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीको चिन्ह हँसिया हतौडा कायम भएको छ।
यससँगै तत्कालीन एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा ओली पार्टीको अध्यक्ष सँगै संसदीय दलको अध्यक्ष समेत रहने पक्का भएको छ। र प्रचण्ड पनि आफ्नो दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको अध्यक्ष रहनेछन्।
दलको विधान अनुसार पार्टीको ह्विप नमान्ने सांसदको पद धरापमा पर्नसक्छ। प्रचण्डसमूहसँग गएका नेकपा नेताहरु एमालेमा नफर्के ओलीले बहुमतको आडमा माधवकुमार नेपाललगायत उनीसँग रहेका सांसदहरूलाई निष्काशन गरी कारबाही गरे त्यतिबेला उनीहरूको सांसद पद नै नरहने खतरा सिर्जना भएको संविधानविद् भीमाजुर्न आचार्यले बताए।
अब माधव, झलनाथ खनालहरुको हकमा कि एमालेमा फर्कनुपर्ने अथवा बहुमत पुर्याएर नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नु पर्ने, संसदीय दलको नेता छान्नपर्ने लगायतका प्रक्रिया पुर्याउन पर्ने हुन्छ। हाल एकअर्काको समूहमा अन्र्तघुलित बनेका नेताहरूले बहुमत पुर्याउनसक्ने सम्भावना कम छ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आए यसले सांसदहरु आफ्नो पुरानै घरमा फर्कनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको हो।
विद्या भट्टराई कुन पार्टीको सांसद?
सर्वोच्चको फैसलाले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपालाई मान्यता नदिएपछि सो पार्टीबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भट्टराईलाई साबिकका कुन पार्टीको सांसद मान्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री एवं एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका रविन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनको क्षेत्र (कास्की क्षेत्र नं २)मा हालै उपनिर्वाचन गरिएको थियो।
सो उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराई (दिवंगत नेता अधिकारीकी पत्नी) विजयी भइन। उनी माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको तर्फबाट सांसद भएकी थिइन्। अब एमाले र माओवादी ब्युँतिने भएपछि उनलाई कुन पार्टीको सांसद मान्नेरु अन्यौलता सिर्जना भएको छ।
प्रचण्ड माधव समूहले सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक निर्णय गरेको र संकट निम्त्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यसका लागि कानुनी परामर्श र पुनरावलोकनका लागि अपील गर्ने प्रचण्ड- माधव समूहको तयारी छ।